ILotto & Lotto Plus South Afrika - Idlalwa kanjani i-lotto ku-inthanethi 2022 - OnlineCasinosOnline
Ikhaya / isiqondisi se-lotto sase-ningizimu afrika esiku-inthanethi / ilotto & lotto plus south afrika – idlalwa kanjani i-lotto ku-inthanethi
ILotto & Lotto Plus South Afrika – Idlalwa kanjani i-lotto ku-inthanethi
I-Lotto & Lotto Plus yase Nignizimu Afrika
I-South African National Lottery yasungulwa ngonyaka ka-2000 kanti ilawulwa yiKhomishini Yelotho Yezwe. Kusukela ngo-2015, iNational Lottery isetshenziswa yi-Ithuba njengomqhubi osemthethweni wohlobo lokugembula oludume kakhulu kuleli zwe lase-Afrika. ILotto ingadlalwa ngabantu abaneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala ngokuthenga amathikithi nokukhetha izinombolo eziyisithupha ezihlukile ngumdlali noma nge-computer ngokuzenzekelayo. Kusukela ngoJulayi 2017, esikhundleni sezinombolo ezingu-49, abadlali bakhetha izinombolo zabo zenhlanhla kusethi yezinombolo ezingu-52 futhi bangadlala imidlalo emibili eyengeziwe ukuthola amathuba amahle wokuwina. Yi-Lotto Plus 1 ne-Lotto Plus 2.
Ungayidlala Kanjani I-Lotto?
Ukudlala iLotto yaseNingizimu Afrika, kufanele ukhethe inhlanganisela yezinombolo eziyisithupha kusuka ku-1 kuye ku-52 bese uthenge ithikithi elilodwa noma amaningi. Uma ungafuni ukukhetha izinombolo, kungenziwa yikhompyutha. Le nketho ibizwa nge-QuickPick futhi iyatholakala ngamanani ahlukile ngokuya ngenani lenhlanganisela ofuna ukuyidlala. Intengo yamathikithi yenhlanganisela yakudala yeLotto ingu-R5, kanti intengo yemidlalo yamabhonasi ingu-R2.50 lilinye. Udinga okungenani ukuthi ube neminyaka eyi-18 ubudala ukuze uthenge amathikithi eLotto.
Ngesikhathi sokusakaza, izinombolo ezi-6 eziwinayo ezivela kusethi yamabhola angu-52 ziyadrowa kanye nenombolo yebhonasi. Le nombolo eyengeziwe inikeza izindlela eziningi zokuwina ikakhulukazi kulabo badlali abafanisa izinombolo ezinhlanu. Ngokwezibalo, amathuba okuwina umklomelo ophezulu weLotto jackpot angamunye cishe ku-14,000,000. Njengoba lo kungumdlalo wenhlanhla, awukwazi ukusungula isu lokuwina kepha kufanele uzame ukuba nenhlanganisela yezinombolo ezingajwayelekile nezilinganayo. Ithuba lokudweba zonke izinombolo eziyinqaba noma zonke ngisho liphansi njengoba inhlanganisela enjalo yenzeka impela kuyaqabukela. Ngaphandle kwalokho, zonke izinombolo eziphakeme noma zonke eziphansi nazo azivamile ukudonselwa futhi kufanele ukhethe ukuhlanganiswa kwezinombolo ezakha ingxenye yokuqala neyesibili yezinombolo ezinikezwayo.
Dlala iLotto ku-Inthanethi.
Ngaphandle kokuthenga amathikithi eLotto kubathengisi beLotto nange-SMS, ungawadlala naku-inthanethi. Ukuze ubambe iqhaza emdlalweni weLotto ngewebhusayithi ye-Ithuba kufanele ubhalise kuqala kuwo noma ngokuthumela igama lakho nenombolo yakho kamazisi nge-SMS noma ngentambo ye-USSD. Ngokushesha nje lapho iphrofayili yakho ibhalisiwe, i-wallet yakho ebonakalayo ezogcina izimali zakho izokwakhiwa. Uzodingeka futhi ukuthi uthumele iphasiwedi eyingqayizivele ukuze ufinyelele iphrofayili yakho nesikhwama semali.
Ngemuva kokuphothula inqubo yokubhalisa kufanele ufake idiphozi kwi-akhawunti yakho ye-Ithuba bese amakhredithi azofakwa esikhwameni sakho semali ukuze ukwazi ukuthenga amathikithi wokudonswa okuqhubekayo. Uzokhokhiswa imali ekhokhwayo ngokuzenzakalela kuwo wonke amadiphozi abekwe esikhwameni sakho esibonakalayo nakwakho konke ukuhoxa kwakho. Yonke imininingwane yemali ekhokhwayo nemikhawulo yokuphuma kwemali kanjalo nezindlela zokubanga umklomelo ingatholakala kuwebhusayithi ye-Ithuba.
Kubiza inani elingakanani Ukudlala I-Lotto?
Intengo yenhlanganisela eyodwa yeLotto ingu-R5. Le ntengo iqale ukusebenza kusukela ngoMeyi 2016 ngenkathi imidlalo yamabhonasi ikunikeza ngamathuba angeziwe wokuwina iza ngemali engu-R2.50 ngamunye.
Yini iLotto Plus 1?
ILotto Plus 1 yithuba elengeziwe lokuwina i-jackpot enkulu. Ukuze bayidlale, abadlali kufanele bahlole le nketho kumathikithi abo eLotto. I-Draw yeLotto Plus 1 yenzeka ngemuva kokuthi i-Draw ejwayelekile yeLotto isiqedile. Ukudlala abadlali beLotto Plus 1 kufanele badlale okungenani inhlanganisela eyodwa yakudala yeLotto.
Yini iLotto Plus 2?
Ukukubeka kalula, iLotto Plus 2 yithuba lesithathu lokuwina labadlali abakhokha u-R2.50 owengeziwe futhi babheke lo mdlalo webhonasi kuthikithi leLotto. Ukudlala iLotto Plus 2, umuntu kufanele adlale yomibili inhlanganisela yeLotto yakudala nomdlalo weLotto Plus 1. Thikha ibhokisi elithi “Dlala Lapha” eduze kukaLotto Plus 2 kuthikithi le-lotto ukusebenzisa leli thuba elengeziwe lokuwina.
Kungani Udlala iLotto?
Imiklomelo yeLotto ingashintsha impilo, ikakhulukazi uma uqondisa zonke izinombolo eziyi-6 bese ushaya umklomelo we-jackpot. Ngenxa yezinguquko zakamuva, abadlali manje baqinisekisiwe ukukhokhelwa umklomelo okuma ku-R50 ngokuqondisa izinombolo ezintathu esikhundleni sokwabelana ngomklomelo we-pool yibo bonke abadlali abawine inhlanganisela.
ILotto Plus nayo ibe nezinguquko, ngakho-ke kusukela manje kuqhubeke i-jackpot emdlalweni wamathuba wesibili izoqhubeka nokugingqika ize iwine esikhundleni sokugingqwa obekuqala ukusebenza kuze kube muva nje. Abadlali abaqondisa izinombolo ezi-3 kumdlalo weLotto Plus baqinisekisiwe ngomklomelo omisiwe abemi kuma-R20. Ukuqondanisa izinombolo ezi-2 neBonus Ball kuLotto Plus 1 neLotto Bonus 2 kuqinisekisa ukuwina ngo-R15.
Umdlali waseNingizimu Afrika uwine iLotto kabili phakathi nalesi sikhathi seminyaka eyisikhombisa, ngakho-ke kufanelekile ukuzama ngoba ungathola ukunqoba okungafika ku-R5,000,000 noma ngaphezulu ngentengo ka-R5 kuphela. Uma uthenga amathikithi amaningi afaka inhlanganisela eyengeziwe amathuba akho okuwina azokwandiswa.
I-Ithuba yinkampani ebhekele ukusebenza kweSouth African National Lottery kusukela ngo-2015. Lowo owayengumqhubi we-lottery uGidani uzame futhi ukubuyisa ilayisense yeLottery enkantolo kodwa isinqumo seNkantolo eNkulu sikuqinisekisile ukuthi i-Ithuba ingumnikazi ofanele welayisensi yeNational Lottery . Njengabantu abasekela i-Ithuba, bazinikele ekwenzeni ngcono ulwazi lwabathengi, babuyise ukholo nokuthembela ku-Lottery Kazwelonke, kanye nokukhombisa umnikelo walo omuhle kwezenhlalo ekuthuthukisweni kwezenhlalo nezomnotho ngokusebenza ngendlela efanelekile futhi eyiyo yeNational Lottery.
Ngabe I-Lotto neLotto Plus Draws Zenzeka Nini?
I-Lotto Draw yenzeka njalo ngoLwesithathu nangoMgqibelo kusihlwa futhi kusakazwa bukhoma ku-TV. Umbukiso womdlalo, iLotto, Lotto Plus 1 nama draw eLotto Plus 2, isakazwa bukhoma kuSABC 2 kusukela ngo-20: 56. I-Draw ye-Lotto Plus 1 yenzeka ngemuva kwe draw ejwayelekile yeLotto kanti idraw yeLotto Plus 2 ithatha indawo gemuva nje ko draw yeLotto Plus 1.